Xukuumada Puntland oo kicinaysa dakhliga dowladda, xili ay dooda xuquuqda shaqaaluhu haraysay xilwareejinadii wasaaradaha – Kalfadhi
Xukuumada Puntland oo kicinaysa dakhliga dowladda, xili ay dooda xuquuqda shaqaaluhu haraysay xilwareejinadii wasaaradaha
Golaha wasiirada Puntland oo maanta yeeshay shirkoodii ugu horeeyay ee golaha oo khamiis walba la qabto ayaa ka dooday qodobo dhawr ah oo ay kobcinta dakhligu ka mid tahay, xili cabasho xoog leh ka soo ifbaxday helitaanka xuquuqda shaqaalaha dowladda.
War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in wasaaradda maaliyada Puntland ay soo bandhigtay qorshe cusub oo lagu horumarinayo dakhliga dowladda.
Xukuumadda ayaa ka faalootay kicinta dakhliga iyo wadashaqaynta hay’adaha dowladda, gaar ahaan laamaha soo xeraynta dakhliga si loo kiciyo qaybtaas oo muhiimad u leh xukuumada cusub.
Wasiirkii hore ee caafimaadka Puntland ayaa ku wareejiyay wasiirka cusub $2.1 Milyan oo doolar oo ah mushaarka 780 ka mid shaqaalaha wasaaradaas, kaas oo aysan helin afar sano.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulahi Deni iyo wasiirka cusub maaliyada Xasan Shire ayaa labaduba baarlamanka hore ugu sheegay mawqifkooda ku aadan horumarinta dhaqaalaha iyo xaqiijinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka oo ay mudo ka jirtay cabasho xoog leh.
Madaxweynaha Puntland oo wareegto ku soo saaray magaca cusub ee wasaarada deegaanka